Cocktail "Sunrise Tequila": amahle isiphuzo iresiphi
"Tequila kwelanga", iresiphi of esizokucabangela ngezansi, ingenye Cocktails best futhi ethandwa kakhulu, okuyinto bayathandeka ngathenga kakhulu izivakashi imigoqo yesimanje nezindawo zokudlela.
NgesiNgisi le "kwelanga" isho ukuthi "kwelanga". Akumangazi, ngoba "Sunrise Tequila", iresiphi Kulula kakhulu futhi elula, ubukeka ufana kakhulu into yemvelo. Mhlawumbe yingakho lo cocktail has a ithandwa enkulu phakathi Ongoti izinhlobo zophuzo oludakayo.
Cocktail "Sunrise Tequila", okuyinto iresiphi wadalwa 20s kwekhulu elidlule, kanye "Long Island" kokuqala kwenziwa ngezinsuku zika Ukwenqatshelwa. Lapho kwazalelwa khona isiphuzo amahle romantic Iyidolobhana Mexican ngokuthi Agua Caliente, esisogwini komngcele wase-United States c.
Kuyaphawuleka ikakhulukazi ukuthi "Sunrise Tequila", iresiphi zazo namanje kuyindaba zokuphikisana, ishintshile ngokuphindaphindiwe ngezithako zawo, elinganayo izinhlobo iziphuzo kanye oda kwabo ukubukeka engilazini. Nokho, namuhla, indlela zokulungisa cocktail enjalo ilula ngokwanele futhi elula. Kule ndaba, kuba kakhulu ngokuvamile ukwenza hhayi kuphela izitolo zokudlela nezindawo zokuphuza, kodwa futhi ekhaya.
Ukuze ngizilungiselele lokhu cocktail okungavamile, kumane kudingekile ukwazi ngezithako zawo. "Tequila kwelanga" kuhlanganisa izithako ezilandelayo (ingilazi eyodwa):
asanda isibambo orange juice - 90 ml;
emhlophe isiraphu "Grenadines" - 20 ml;
ice ochotshoziwe - ngokubona;
fresh orange locezu noma cherry ezimbalwa - ngokokuhlobisa.
"Sunrise Tequila": iresiphi for isiphuzo enhle futhi esihlwabusayo
Ngaphambi ukulungiselela isiphuzo wedwa, ufuna ukuthenga ingilazi ekhethekile ubude - hayboll. Phela, ngaphandle-ke okwenza cocktail ngeke neze eziyinkinga. ice ochotshoziwe (kungenzeka amabhlogo ezivamile) kumele wafaka beaker (ukuze aseduze laphezu komhlabathi) bese uthele 35 ml i-tequila. Eceleni iziphuzo eqinile utshwala kufanele ukungezwa asanda isibambo orange juice. Uma ungenalo ezisawolintshi, kuyinto ukulungiselela le cocktail ingasetshenziswa futhi ijusi evamile e amaphakheji edayiswa ezitolo.
Isigaba sokugcina kulungiselelwa lesi siphuzo
Ngemva izithako ezimbili kunezelwa ingilazi, utshani kudinga wokuziphilisa kufiphaze ice, bese uthele 20 ml emhlophe isiraphu "Grenadines". Kuyaphawuleka ikakhulukazi ukuthi isibalo ketshezi elikhanyayo amnandi kumele singeqi nezinhlinzeko zalesi ikhodi. Kungenjalo cocktail ngagama romantic "kwelanga" ngeke amahle okumnandi njengoba ngingathanda. Lokhu kulandelwa ukulinda kuze laseGranada lehla phansi ingilazi. Kungaleso sikhathi kuphela lapho ingilazi ubude egcwele uketshezi ezintathu ezahlukene kungenziwa ehlotshiswe nocezu orange fresh noma cherry ezimbalwa uhlomo.
Naphezu kweqiniso lokuthi kule iresiphi abathintekayo ngempela isiphuzo eqinile oludakayo, baphuze "Tequila kwelanga" has ngezinga eliphezulu kakhulu. Kodwa ukuba ahileleke nakho akufanele kube.
Coffee Frappe - Iyini?
Replenishment amafa afundwa: imithombo, ezimali, accounting okufakiwe